tsena hitika, ilay tsena ahitanao ny rehetra
Fihaonana no anaran'ny tsena taloha fa Andrianampoinimerina no vao nanome azy io anarana hoe tsena io (Rakibolana, taona 1995 pejy 981).
Midira ho mpitsidika tsotra
Aza atao mihoatra ny tarehintsoratra 10.
Raha misafidy ity fomba fidirana ho mpitsidika tsotra ity ianao dia tsy hisy ahalala. Noho izany iagavina ianao mba tsy haka ny anarana famantarana ny mpisera hafa mba tsy hisian'ny fifangaroana.
Midira amin'ny Anarana nisoratanao tato amin'ny tranonkala
Ny anaranao ato amin'ny tranonkala
Ny teny fanalahidinao ato amin'ny tranonkala
Lazao ny tolotrao na/sy ny tinadinao
Ny momba anao, aiza no misy anao (finday, mailaka, sns) ?
Raha mbola tsy nisoratra anarana teto amin'ny tranonkala ianao dia tsindrio "eto"
Sasin-teny sy fitsipika
Ity no pejy ahafahanao miditra ato amin'ny fihaonana hitika. Safidio etsy ambony ny fomba hidiranao. Aza adino ny manamarina izay voasoratra.
Eto ampidirana ny tranonkala hitika ianao, sehatra izay hifaneraseranao amin'ny olona maro. Noho izany, ireto misy fitsipim-pitondrantena sy torolalana vitsivitsy tsara arahinao mba tsy ho sahirana ianao:
1. Manaja ny hafa, aza manely teny na tsaho mety handratra na hampalahelo na hampidi-doza ireo hafa. Raha misy olona tsy mety aminao na manafintohana anao ny fitondrantenany dia resaho manokana izy. Raha mbola tsy milamina ny raharaha dia ampandreneso ny mpiandraikitry ny tranonkala fa izy ireo no hanapakevitra,
2. Tsy azo atao ny midinika na mivohy na manaparitaka hevitra na tarehin-kevitra mitondra sy manentana ny olona any amin'ny fifankahalana na herisetra isan-karazany,
3. Amin'ny maha sehatra misokatra sy maimaimpoana nefa kosa misy mpandrindra an'ity tranonkala ity, ampafantarina ireo mampiasa azy fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fisolokina na fitaka izay mety ahavoa ireo rehetra miseraka ato ireo tomponandraikitry ny tranonkala, nefa kosa manome toky fa hanao izay azon'izy ireo atao, araka ny fara heriny, ary ampiasa ny fomba sy fitaovana rehetra ampelatanany mba tsy hisian'izany izy ireo,
Ireo mpiandraikitry ny tranonkala hitika dia mirary filaminana, fihaonana, fifanabeazana ary fifampizarana mitondra vokatsoa sy anatin'ny fifanajana tanteraka ho an'ireo mpisehatra rehetra tonga ato.